Amabhonasi ekhasino aku-inthanethi eNingizimu Afrika
Ikhaya / amabhonasi akhethekile ekhasino ye-inthanethi eningizimu afrika
Amabhonasi Akhethekile Ekhasino Ye-inthanethi ENingizimu Afrika
Kulesi sigaba sizobhala amabhonasi ekhasino ye-inthanethi atholakalayo kubandakanya amabhonasi wamahhala ediphozithi engekho namabhonasi okukwamukela ediphozi amahle kakhulu (Bheka ithebula elingezansi). Sixoxisana njalo ngamaphomoshini akhethekile namabhonasi amahhala nabalingani bethu bekhasino ye-inthanethi baseNingizimu Afrika.
Vele uchofoze inkinobho ethi “Dlala Manje” futhi uzoqondiswa kabusha kuwebhusayithi yamakhasino ukudawuniloda isofthiwe bese uqala ukuwina! Hlola njalo ukuqinisekisa ukuthi uhlala unolwazi uma kukhulunywa ngamabhonasi ekhasino e-inthanethi akhethekile!
Amabhonasi Akhethekile Ekhasino Ye-inthanethi
Ibhonasi Yokudiphozitha Ethandwayo
Amakhasino e-inthanethi ahlinzeka ngamabhonasi okudiphozitha athandwayo kubadlali abasebenzisa izindlela abazithandayo zokudiphozitha imali. Imvamisa uthola lokhu uma ukhetha ukusebenzisa enye yezindlela zabo zokukhokha ezisohlwini ze-elektroniki.
Lawa makhasino e-inthanethi azoba nezizathu zawo zokuthi kungani angathanda ukuthi usebenzise olunye lwezinhlelo zawo zokukhokha. Imvamisa abambisana nale nkampani futhi lokhu kusho ukuthi bathola izaphulelo ezikhethekile zokusebenzisa lolu hlelo noma imali yokucubungula iphansi kakhulu kunamakhadi esikweletu.
Ngamabhonasi okudiphozitha athandwayo uvame ukuthola imali ephakathi kuka-5 no-25% uma udiphozitha ngale ndlela. Izindaba ezinhle ukuthi lolu hlobo lwediphozithi lufakwa ngokushesha ku-akhawunti yakho yekhasino kodwa izindaba ezimbi ukuthi akufanele ujabule kakhulu uma ubona ibhonasi ka-R3,000 yediphozithi ethandwayo. Imvamisa uthola imali ethe xaxa uma ufaka isamba esikhulu futhi uvamise ukufaka imali engango-R20,000 ukuze uthole ibhonasi ka-R3,000 yediphozithi ethandwayo.
Ibhonasi Yokudiphozitha Kabusha
Amakhasino e-inthanethi anikeza amabhonasi okudiphiztha kabusha ukuqinisekisa ukuthi uqhubeka udiphozitha kabusha imali ku-akhawunti yakho futhi ugcine ukugembula ekhasino labo. Lolu hlobo lwebhonasi luvame ukufana nebhonasi lokukwamukela futhi luvame ukunikela ngemali yamahhala phakathi kuka-50% kuya ku-100% ngokudiphozitha kwakho kabusha.
Amabhonasi ekhasino ye-inthanethi angaba yindlela enhle yokukhulisa isikhwama sakho kepha kufanele ubhekane namaqiniso uma ufunda ngala mabhonasi. Amakhasino ngeke akunike imali yamahhala ngaphandle kokuthola imbuyiselo kuwo. Sithola ukuthi amabhonasi angokoqobo ngokuvamile ayindlela engcono kakhulu yokukhetha. Amanye amakhasino azonikela ngamabhonasi ekhasino wamahhala afinyelela ku-R10,000 ehoreni lokuqala lapho ugembula nawo, kepha lokho kuvame ukuthi kusho ukuthi kuzodingeka usebenzise leyo mali izikhathi eziningi ngaphambi kokuthi ukwazi ukukhipha noma yikuphi okuwinile NOMA izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali imvamisa ziphakeme kakhulu.